Saraakiil iyo askar loo xiray qaraxii Xarunta Wasaaradda Arrimaha Gudaha | Sagal Radio Services
Saraakiil iyo askar loo xiray qaraxii Xarunta Wasaaradda Arrimaha Gudaha
Sagal Radio Services • News Report • July 9, 2018
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in saraakiil iyo askar isugu jira Boolis iyo nabadsugid loo xiray tuhun ku saabsan weerarkii Sabtidii la soo dhaafay lagu qaaday Xarunta Otto Otto oo aheyd xarumaha Wasaaradaha Arrimaha Gudaha iyo Amniga.
Saraakiisha la xiray ayaa gaarayay illaa 14 ruux, waxaana ay qaarkood Taliyeyaal ka ahaayeen koontaroolada bartamaha magaalada iyo qaar ka mid ah degmooyinka, iyagoo loo heysto sida ay ku suura gashay in gaadiidka qarxa iyo dableydii hubeysneyd ay ku soo gudbeen.
Amarka lagu xiray Saraakiisha iyo askarta ayaa waxaa bixiyay Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale, waxaana saraakiisha la xiray ku socoto baaritaano iyo su’aalo weydiin.
Wararka ayaa intaa ku daraya in qaar ka mid ah Saraakiisha lagu sameeyay shaqo joojin, kaddib markii looga shakiyay inay fududeeyeen weerarka, halka kuwa kalena lagu eedeeyay inay gabeen shaqadooda oo ay dayaceen amnigii loo xil saaray.
Xariggan ayaa ka dambeeyay, markii shalay magaalada Muqdisho uu ka dhacay kulan u dhaxeeyay Wasiirka Amniga, Taliyeyaasha ciidamada iyo Maamulka Gobolka Banaadir, kaasoo looga hadlayay xaalada amniga Muqdisho iyo weerarkii Otto Otto.
Inta badan ma dhacdo marka ay wax dhacaan in masuul shaqadiisa gudan waayay uu is casilo ama xilalkooda ay waayaan saraakiil ciidan, balse keliya waxaa la maqlaa baaris inay socota, cidii ka dambeysay talaabo ayaa laga qaadaa iyo ereyo kale oo aan dhaafsiisneyn afka baarkiisa.
Su’aalo badan ayaa ka dhalatay weerarkii xarunta Otto Otto iyo sida ay ku suura gashay in gaadiid qarax iyo dabley hubeysan ay weerareen, iyadoo halka ay ku taal xarunta la weeraray ay aheyd qad cagaaran uu amnigeeda aad u adag yahay, isla markaana amnigeeda aad u adag yahay, waxaana tani ay keentay fadeexo hareysay laamaha amniga Muqdisho oo maalmihii u dambeeyay jidad badan oo magaalada ka mid ah xiray, dadka iyo gaadiidkana loo diiday inay maraan.
Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarkii Sabtidii la soo dhaafay ka dhacay xarunta Otto Otto, waxaana weerarkaas ku dhintay dad ka badan 10 ruux, halka tiro intaa ka badan ku dhaawacmeen.